Bit By Bit - Abuuritaanka wada shaqeyn xooggan - 5.5.5 U anshaxa
Dhiirrigalinta anshaxa waxay khuseysaa dhammaan baaritaanka lagu sharraxay buuggan. Marka laga soo tago arimaha guud ee anshaxa-looga hadlayo cutubka 6-arimaha gaarka ah ee anshaxa ayaa soo ifbaxaya mashaariicda iskaashiga ballaaran, ka dib marka iskaashiga isbeddelka uu yahay mid cusub oo cilmi-baaris bulsheed, dhibaatooyinkaas oo aan si buuxda u muuqan karin marka hore.
Dhammaan mashaariicda iskaashiga guud, arimaha magdhawga iyo deynta waa kuwo adag. Tusaale ahaan, dadka qaarkood waxay tixgeliyaan in aan loo dulqaadan karin in kumanaan qof ay sannadkii ka shaqeynayeen Netflix Prize iyo ugu dambeyntii ma helin magdhow. Sidoo kale, dadka qaarkiis waxay tixgeliyaan wax aan caadi aheyn si ay u siiyaan shaqaalaha ku jira suuqyada shaqaalaynta mikrotask aad u yar oo lacag ah. Marka lagu daro arimaha magdhawga, waxaa jira arimo la xiriira credit. Dhammaan ka qaybgalayaasha wada shaqaynta guud waa qorayaasha waraaqaha sayniska ee ugu dambeeyay? Mashaariic kala duwan waxay leeyihiin habab kala duwan. Mashaariicda qaarkood waxay siinayaan dhibco madax-xirfadeed oo loogu talagalay dhammaan xubnaha iskaashiga ballaaran; Tusaale ahaan, qoraaga ugu dambeeya ee warqadda Foldit ee ugu horeysay wuxuu ahaa "Ciyaartoy Foldit" (Cooper et al. 2010) . Qoysaska Galaxy Zoo ee mashaariicda, kuwa aad u firfircoon iyo kuwa muhiimka ah ayaa mararka qaarkood lagu martiqaaday in ay noqdaan kuwa ku biira waraaqaha. Tusaale ahaan, Ivan Terentev iyo Tim Matorny, oo ah laba ka mid ah Raadiyaha Galaxy Galaxy, waxay ka mid ahaayeen waraaqihii ka soo baxay mashruucaas (Banfield et al. 2016; Galaxy Zoo 2016) . Marmarka qaar mashaariicda ayaa keliya qiraya deeqda aan wada-joogsi lahayn. Go'aanka ku saabsan isku xirnaanshaha wuxuu si cad u kala duwanaan doonaa kiiskiisa.
Wicitaanada furan oo loo qaybiyey xog ururinta waxay sidoo kale keeneysaa su'aalo adag oo ku saabsan ogolaanshaha iyo asturnaanta. Tusaale ahaan, Netflix waxay sii daayeen macaamiisha filimka cid walba. Inkasta oo qiimayaasha filimku aanay u muuqan mid xasaasi ah, waxay muujin karaan macluumaadka ku saabsan rabitaanka siyaasadeed ee macaamiisha ama jihada galmada, macluumaadka ay macaamiishu ku heshiin waayeen inay dadweynaha ka dhigaan. Netflix ayaa isku dayay in la aqoonsado macluumaadka si aan qiime u noqon karin qof kasta oo gaar ah, laakiin todobaadyo ka dib markii la sii daayay xogta Netflix waxaa qayb ahaan dib loogu aqoonsaday Arvind Narayanan iyo Vitaly Shmatikov (2008) (eeg cutubka 6). Dheeraad ah, ururinta xog ururinta, cilmi baarayaashu waxay ururin karaan xogta ku saabsan dadka iyaga oo aan ogolaanshahooda. Tusaale ahaan, Mashruuca Journals Journals Malawi, Wadahadal ku saabsan mawduuc xasaasi ah (AIDS) ayaa la tarxiilay iyadoon oggolaansho ka helin ka qaybgalayaasha. Mid ka mid ah dhibaatooyinkan anshaxeedku waa mid aan la isku hallayn karin, laakiin waa in lagu tixgeliyaa marxaladda naqshadeynta mashruuca. Xusuusnow, "dadku" waxay ka kooban yihiin dadka.